Check the operation of transmi Inglese-Birmano - MyMemory
Hai cercato la traduzione di check the operation of transmissi... da IngleseaBirmano
_M ခွေကိုစစ်ရန် MD5 ဖိုင်ကိုအသုံးပြုပါ
Every user can also check the status of three other users.
အသုံးပြုသူ တစ်ဦးတိုင်းသည် အခြား အသုံးပြုသူ သုံးဦး၏ အနေအထားကို လည်း စစ်ဆေးနိုင်သည်။
စီဒီ/ဒီဗီဒီမှ ဒေတာတည်မြဲမှုကို စစ်ဆေး
စီဒီ/ဒီဗီဒီမှ ဒေတာတည်မြဲမှုကို စစ်ဆေးpicture
Check the current document for incorrect spelling
လက်ရှိစာရွက်စာတမ်းရှိ စာလုံးပေါင်းအမှားတွေကို စစ်ဆေး
Checks the spelling of the current document.
လက်ရှိ စာရွက်စာတမ်း၏ စာလုံးပေါင်းကို စစ်ဆေး
ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ထိုသခင်နှင့်အတူ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကို ခံကြ၏။ ခရစ်တော်ကို သေခြင်းမှ ထမြောက်စေ တော်မူသော ဘုရားသခင်၏ ပြုပြင်အားထုတ်တော်မူခြင်းကို ယုံကြည်သောအားဖြင့်၊ ဗတ္တိဇံကိုခံ၍ ထိုသခင် နှင့်အတူ ထမြောက်ခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏။
သူတို့သည် ထာဝရဘုရား၏အမှုတော်ကို၎င်း၊ လက်တော်နှင့်ပြုပြင်တော်မူရာကို၎င်း မမှတ်ကြသော ကြောင့်၊ တည်ဆောက်တော်မမူ၊ ဖြိုဖျက်တော်မူမည်။
မည်သည့်အခြေအနေတစ်ရပ်အထိ ပျံ့ပွားနိုင်သည်ကို ထောက်လှမ်းဆဲဖြစ်သော်လည်း ရောဂါလက္ခဏာမပြသသော သူများမှ ရောဂါပျံ့နှံ့စေနိုင်ကြောင်း အထောက်အထားလည်း ရှိပါသည်။
ထိရောက်သော ကာကွယ်ဆေးများသည် ရောဂါပိုးများ ရှင်သန်သိုမှီးရာ တိရစ္ဆာန်များနှင့် ရောဂါပိုးရှိသော လူသားများထံမှ ကူးစက်လွယ်သော လက်ခံသူများဆီသို့ ကူးစက်သော ကူးစက်မှုလမ်းကြောင်းကို ဖြတ်တောက်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီး ပေါ်ထွက်လာသည့် ဗိုင်းရပ်စ်များကြောင့် ဖြစ်ပွားသည့် ကပ်ရောဂါများကို ထိန်းချုပ်ရာတွင် ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး ကုသမှုနှင့် ထပ်တူထပ်မျှအရေးပါသည်။
စမ်းသပ်တဲ့ swap ဖိုင်တခုကို မဖွင့်နိုင်ဘူး။ အချက်အလက်ကြမ်း ဆုံးရှုံးမှုကို ရှောင်ရှားဖို့၊ သင့်ရဲ့ ဦး​စားပေးချက်များ (လောလောဆယ် "%s") ထဲမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ swap ဖိုင်တွဲရဲ့ တည်နေရာနဲ့ ခွင့်ပြုချက်များကို စစ်ဆေးပါ။
The Islamic Front's statement says that according to preliminary information, more than 50 of Al Assad's soldiers and thugs were killed in the operation.
အစ္စလမ်မစ် ရှေ့ပြေးတပ်များ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ကနဦး အချက်အလက်များအရ အာဆတ်၏ စစ်သား နှင့် လူရမ်းကား ၅၀ ကျော်ဟာ ဤစစ်ဆင်ရေးတွင် သေဆုံးခဲ့သည် ဟုပြောသည်။
စီစဉ်ဖန်တီးထားတဲ့ ဖိုင်အမည် စာဝှက်ရေးသားမှုကို UTF-8: %s အဖြစ် အသွင်ပြောင်းလို့ မရဘူး။ ပတ်၀န်းကျင် ကိန်းရှင် G_FILENAME_ENCODING ကို စစ်ဆေးပါ။
သူတို့၏ပွဲ၌စောင်း၊ တယော၊ ပတ်သာ၊ ပုလွေ၊ စပျစ်ရည်ပါတတ်၏။ ထာဝရဘုရား၏ အမှုတော်ကိုကား၊ ပမာဏမပြုကြ။ လက်တော်နှင့် ပြုပြင်တော်မူရာကို မရိပ် မိကြ။
ဖလှယ်ရေး ဖိုင် မဖွင့်နိုင်ဘူး။ GIMP မှာ မှတ်ဉာဏ် ကုန်သွားပြီး ဖလှယ်ရေး ဖိုင်ကို မသုံးနိုင်ဘူး။ သင့်ရုပ်ပုံများရဲ့ အချို့အပိုင်းများဟာ ပျက်စီးနိုင်တယ်။ တခြား ဖိုင်အမည်များကို သုံးပြီး သင့်ရဲ့ အလုပ်ကို သိမ်းဆည်းဖို့ ကြိုးစားပါ၊ GIMP ကို ပြန်ဖွင့်ပြီး ဖလှယ်ရေး ဖိုင်တွဲ တည်နေရာကို သင့်ရဲ့ ဦးစားပေးချက်များ ထဲမှာ စစ်ဆေးပါ။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဈေးဝယ်စင်တာဖွင့်ထားသူများက သန့်ရှင်းရေးများ ပိုမိုလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အပူချိန်တိုင်းကိရိယာများအား တပ်ဆင်ပြီး ဈေးဝယ်လာသူများ၏ ကိုယ်အပူချိန်အား စစ်ဆေးခြင်း၊ ပွဲများအား ဖျက်သိမ်းခြင်း အစရှိသည့် ထပ်တိုးနည်းလမ်းများအား သတ်မှတ်အသုံးပြုကြသည်။ လက်တင်အမေရိကအတွက် ကုလသမဂ္ဂစီးပွားရေးကော်မရှင်၏ ခန့်မှန်းချက်အရ လက်တင်အမေရိကတွင် ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားပြီးချိန်တွင် အလွန်အမင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ အရေအတွက်သည် ကပ်ရောဂါမဖြစ်ပွားခင်အချိန်ကထက် 14 သန်းမှ 22 သန်းအထိ မြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းသည်။
memecut (Malese>Inglese)mendatangkan kesan buruk (Malese>Cinese semplificato)mesa de notte (Italiano>Inglese)erp (Spagnolo>Inglese)informasie oor herwinning (Afrikaans>Inglese)i'm coming (Inglese>Italiano)just say something for me (Inglese>Hindi (indiano))risotto ai quattro formaggi (Italiano>Inglese)बीपी पिक्चर बी पी (Hindi (indiano)>Inglese)ok sir i’ll talk to him and let you know (Inglese>Hindi (indiano))puoi per favore indirizzarmi alla persona giusta (Italiano>Inglese)sayo ang lahat ng papuri at pasasalamat panginoon (Tagalog>Inglese)programmitöö (Estone>Maltese)yo se cocinar (Spagnolo>Inglese)entre, por favor (Portoghese>Inglese)دائمة (Arabo>Greco)ano ang tradisyon at kultura ng indones (Tagalog>Inglese)fairy tales the gingerbread man (Inglese>Afrikaans)nepiedalīšanos (Lettone>Italiano)viêm amidan (Vietnamita>Inglese)come stai spagnolita (Italiano>Spagnolo)bugatti (Russo>Inglese)bf हिंदी में bf hindi mein (Inglese>Hindi (indiano))in allegato trovi la copia firmata (Italiano>Inglese)parum affinis (Latino>Inglese)